'Dhiibbaa jirurraa dhaabbileen siyaasaa kora federaaliizimiirratti argamuu hin dandeenye,' Dr. Dabratsihon G/Mikaa'el - BBC News Afaan Oromoo
'Dhiibbaa jirurraa dhaabbileen siyaasaa kora federaaliizimiirratti argamuu hin dandeenye,' Dr. Dabratsihon G/Mikaa'el
Sababi dhiibbaa jirurran kan ka'e paartileefi namooti siyaasaa hedduun kora federaalizimii Maqaleetti qophaa'erratti argauu akka hin dandeenye Pirezedaantiin Itti-aanaa mootummaa naannoo Togiraay Dr. Dabratsihon Gabramikaa'el himan.
Dhiibbaan jiru akkum jirutti ta'ee garuu paartileen siyaasaa biyyaalessaafi naannoo 50 oliifi qaamoleen hawaasaa adda adda 700 olis irratti argamaniiru jedhu qindeessitoonni kora kanaa.
Aanga'oonni olaanoo mootummaa duraanii akka aadde Gannat Zawudee fi Obbo Kaasuu Ilaalaa kora kanarratti argamanii jiru.
Dhaabbileen siyaasaafi namootni hedduun osoo hirmaachuuf fedha qabanii dhiibbaa isaanirra gaheen kora kanarraa hafuu Dr Dabratsiyoon himaniiru.
Addi Bilisummaa Uummata Tigiraay 'TPLF' kora mata duree Heera mootummaa fi sirna federaalawaa Sab-daneessaa baraaruu jedhuun yeroo lammataaf Maqaleetti taa'aa jira.
Kora paartileen siyaasaa fi namootni adda addaa naannolee gara garaa irraa afeeramanii irratti hirmaatan kanarratti, Itoophiyaan rakkoo daran hamaafi sodaachisaa keessa akka jirtutu himame.
Korri kun rakkoo biyyattiin keessa galterraa baraaruuf fala barbaaduuf yaadameeti jedhan pireezidantii itti aanaan Naannoo Tigiraay Dr Dabratsiyoon Gabramikaa'el.
"Humnootaa keessaa fi alaatiin sochii biyya diiguu raawwatamaa jiruun, rakkoof saaxilamaa jirra. Nagaan boora'aa jira, olaantummaan seeraa hin kabajamu, heerri mootummaas ifatti cabaa jira" jedhan.
Kanaafuu gaaffileen biyyattii haala rakkisaa amma keessatti argamu keessaa akka baatuuf maal taasisuu qabaanna? Daandii kam hordufuutu barbaachisa? jedhan deebiisuun alattis, miidhaafi badiinsarraa baraaruun kan danda'amu ta'u himaniiru.
Naannoo Oromiyaa irraa dhaabni siyaasaa Kongirasii Biyyaalessaa Oromoo, kan mootummaa duraan ture waliin hidhata akka qabu komatamu hirmaateera.
Marichi kaka'umsa 'TPLF' fi Yuunivarsiitii Maqaleetiin qophaa'ee kan jedhan dura taa'aan dhaaba kanaa Obbo Tolasaa Tasfaayee humnoota yaada federaalawaa qabantu irratti hirmaataa jira jedhan.
"...firri dhaabbataas ta'e, diinni dhaabbataan hin jiru"
Waggoota 27 darban sirni federaaliizimii raawwii isaatu rakkoo qaba ture, diimokiraasiin hin deeggaramne kan jedhan Obbo Tolasaan, sun akka sirratu gaafataa turre jedhan.
"Amma ammoo rakkoo biraatu dhalate. Sirnumti diimokiraasii duraan xiqqoo xiqqoo mul'ataa turte cituudhaaf jetti."
Sirni federaaliizimii amma jiru gaaffii afaaniifi aadaa sabootaa deebisuu irratti rakkoo hin qabu, 'TPLF's kana keessatti rakkoo hin qabu jedhu Obbo Tolasaan.
"'TPLF' rakkoon isaa sirnichi akka sirriitti lafa hin qabannee gochuu fi gaaffii mirgaa fi eenyummaa ukkaamsuudha, haa ta'uutii kan as dhufaa jiru kun ammoo daran gara mootummaa tokkichaa, afaan tokkichatti adeemaa jira" jedhu.
'TPLF' dogoggora kaleessaatiif seenaaniis seeraanis itti gaafatamoodha kan jedhan namni kun "siyaasaa keessatti qabsoo dhaabbataa malee, firri dhaabbataas ta'e, diinni dhaabbataan hin jiru" jedhan.
Kanaaf rakkoo as nutti adeemaa jiru akkamiin jalaa baana jennee mari'achaa jirra jedhan.
Kora 'TPLF' magaalaa Maqaleetti taa'amaa jiru kun isa lammataati.
'TPLF' sirnuma federaalaawaa waggoota 27 darban ofii isaa diigaa tureefi heera mootummaa ofii cabsee ittiin nama dararaa tureef akka wabii dhaabbatu fakkeesse falma jechuun aanga'oota ODP dabalatee rogeeyyiin hedduun 'TPLF' qeequ.
Korri Wiixata kaleessaa eegale har'as itti fufee mari'atamaa jira.
Seerrii haaraan Indiyaa amantaa bu'uureffate hokkora kaase